Ntughari Ncha Akwa China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ntughari Ncha Akwa - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ntughari Ncha Akwa)
Actorylọ ọrụ na-akpụ akpụ akwa
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC Ulo akwa ngwa ngwa uzo bu ihe eji eme ndu anyi, a na-eme ngwa ngwa uzo eji eme ulo oru ma nwekwa nnukwu uru na mmeputa, n’inye oge. Ọnụ ụzọ dị elu na-ebili arụmọrụ anyị na-arụ ọrụ, Yabụ ugbu a, mụtakwuo anyị banyere ọnụ ụzọ ngwa ngwa! Ọnụ ụzọ dị elu maka ime ụlọ oyi bụ usoro ụzọ, nke a...
Akwa akwa ọsọ na-akwa akwa
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC Kedu ihe bụ nnukwu ọnụ ụzọ na-agba? Ọmụmụ nke ọsọsọ ọsọ bụ mkpa dị mkpa maka usoro mmepụta ngwa ngwa, ibu njem, ịnapụta ngwa ngwa. N'iji ya tụnyere ọnụ ụzọ aluminom, ọnụ ụzọ ngwa ngwa abụghị ihe dị oke ọnụ mana ọ na-egosi uru ndị ọzọ pụrụ iche. Ọnụ ụzọ dị elu maka ime ụlọ oyi bụ usoro ụzọ,...
Ntughari Ncha Akwa Ntughari ncha akwa Ntughari Ntughari Ntughari Ntughari Ntughari Ntughari ngwa ngwa simpe Ntughari elu Ntughari na-achagharị azụ Ntughari Onwe-gi